Iindaba ezimbi ngeDagg yokuDibana ngaphambili ... | Martech Zone
Iindaba ezimbi ngeDagg's Dating Front…
NgoLwesihlanu, Agasti 17, 2007 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
Kubonakala ngathi akunakubakho 'ntlanzi zolwandle' zininzi njengoko bendinokulindela! Ngaba likho ithemba ngeNdoda eNye yeKhompyuter yeGeek?
Ngokwe-Bureau of Labor Statistics, abasetyhini bagcwalisa kuphela iipesenti ezingama-26.7 zeekhompyuter kunye nezikhundla zemathematika ngo-2006?
Umfanekiso ovela IMacenstein's Mac Chick yeNyanga.
Uhlalutyo lukaGoogle: Ukulandelela iphepha leqela lesithathu
Ndenze njani ukuba nomdla kwiMithombo yeendaba yeNtlalo?
Agasti 17, 2007 ngo-6: 06 PM
Ukuba kukho umntu onokuyenza, unga, Doug!
Agasti 18, 2007 kwi-7: 50 AM
Ngokuqinisekileyo bendihlekisa ngale nto… inkxalabo yam iphindwe kabini. Ndiyakholelwa ukuba iofisi, ubunkokeli kunye nenkampani zilunge ngakumbi kubasebenzi ababhinqileyo. Kuyothusa ngokwenene ukuba ishishini alitsali abasetyhini abaninzi. Iyandikhathaza le nto.
Kwaye, ewe, ukuthatha ixesha lokuzihlaziya okuhlekisayo kubomi bam babucala kuhlala kuyinto ehlekisayo. 🙂